Vavolombelon’i Jehovah—Fotoana Manokana Aminay | JW.ORG
Fivoriambe Iraisam-pirenena 2014: Mikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra ny Vavolombelon’i Jehovah
Jereo ato ireo mpirahalahy maneran-tany, izay tonga mba hianatra momba ny Fanjakan’Andriamanitra.
Sambany ny Vavolombelon’i Jehovah an’arivony miteny tagalog any Eoropa, no nanao fivoriamben’ny vondrom-paritra naharitra telo andro.
Tianay Hitohy Foana Izao
Jereo ato fa mifankatia sy miray saina ny olona samy hafa foko, fiteny, ary firenena, mandritra ny fivoriambe iray tany Yangon, any Myanmar.
Afaka nanatrika fivoriambe tany aminy sady nitsidika havana ny misionera sy ny mpanompo manontolo andro manokana hafa manompo any ivelan’ny taniny, satria nampian’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nahazo diplaoma ny kilasy faha-138 tamin’ny 14 Martsa 2015. Nampirisihina hianatra momba an’i Jehovah sy hanahaka an’i Jesosy ny mpanatrika rehetra.
Fizarana Diplaoman’ny Kilasy Faha-138 Amin’ny Sekolin’i Gileada
Nasongadina tamin’ilay fandaharana hoe ahoana no azon’ireo mpianatra ampiasana ny zavatra nianarany, mba hanampiana ny hafa. Nisy hira vaovao efatra natao koa tamin’ilay izy.
Olona an’arivony tsy mitovy fiaviana sy kolontsaina ary fiteny no tafaraka nefa miray saina tsara.
Nitsidika an’i Rosia sy Ukraine ny Filan-kevi-pitantanana mba hampahery an’ireo Vavolombelon’i Jehovah namany any. Nisy korontana ara-politika mantsy tany.
Nankasitrahan’ny manam-pahefana sady noraisiny tsara ireo mpanatrika fivoriambe avy any amin’ny firenena 28 mahery, tamin’ny Jolay sy Aogositra 2014.
Nanamarihana ny faha-100 taona niorenan’ny Fanjakan’ny Mesia io fivoriana manan-tantara io.
Vahiny an’arivony no tonga nanatrika ny fivoriana faha-130 nataon’ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Jereo ny zava-nisongadina tamin’ny fanamarihana ny faha-100 taonan’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Nampirisihina ny rehetra mba hanetry tena foana sy handatsaka ao am-po ny hevitr’i Jehovah.
Efa hatramin’ny 1943 ny Sekolin’i Gileada no nampiofana olona, mba hahatonga azy ireo hanana fahalalana marina momba an’Andriamanitra. Jereo ny zava-nisongadina tamin’ny fizarana diplaoma.
Nisy lahateny ara-baiboly, fanadinadinana an’ireo mpianatra, ary fampisehoana ny zava-nitranga teny amin’ny fanompoana.
Nampirisika ny mpianatra hanahaka ny toe-tsain’i Jesosy ny mpampianatra sy mpandahateny hafa. Nankafy an’ireo fanadinadinana sy fijerena ny zavatra hitan’ny mpianatra teny amin’ny fanompoana ny mpanatrika.
Vahiny avy any amin’ny tany maro no nanatrika ny fivoriana faha-128 nataon’ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Nampitaina Mivantana Tamin’ny Alalan’ny Internet Ilay Fandaharana
Ahoana no nahafahan’ny olona maherin’ny 1,4 tapitrisa, tany amin’ny firenena 31, hanatrika an’io fandaharana tena manokana io?
Olona 1 400 000 mahery tany amin’ny tany 31 no nanatrika an’ilay fivoriana namoahana Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina amin’ny teny anglisy.
Nahavariana ny nahita olona samy hafa fiaviana niara-nivory tamin’ny 2012 tany Tel Aviv, any amin’ny tany voazarazaran’ny fivavahana sy ny fitiavan-tanindrazana.
Olona 10 000 mahery no nanatrika an’io fotoan-dehibe tamin’ny 14 Septambra 2013 io. Ho hitanao ato ny zava-nisongadina tamin’ilay fandaharana.
Mampiofana mpitory Vavolombelon’i Jehovah za-draharaha io sekoly io mba hahafahan’izy ireo hahita vokatra bebe kokoa any amin’izay anendrena azy.
Nisy fivoriamben’ny vondrom-paritra manokana hoe “Arovy ny Fonao!” natao tany Dublin any Irlandy, tamin’ny 2012. Nandray tsara ny vahiny ny Vavolombelon’i Jehovah tany. Jereo ato ny momba izany.
Vao haingana izay ny Vavolombelon’i Jehovah no nanao fivoriamben’ny vondrom-paritra manokana tany Brezila, Costa Rica, Hong-Kong, Irlandy, Israely, Nouvelle-Zélande, ary Soeda.
Nampiofana misionera ny Sekolin’i Gileada, tato anatin’ny 70 taona. Jereo ny zava-nisongadina tamin’ny fizarana diplaoma.
Ampahany amin’ny fanadinadinana natao tamin’ny mpianatra roa nanatrika ny kilasy faha-133 amin’ny Sekolin’i Gileada.
Jereo ny zava-nisongadina tamin’ny fizarana diplaoman’ny kilasy faha-133 amin’ny Sekolin’i Gileada.
Video: Zava-nisongadina Tamin’ilay Fivoriambe Maneran-tany Tamin’ny 1963
Jereo ato ny ampahany amin’ilay filma maharitra adiny roa momba an’ilay fivoriambe hoe “Vaovao Tsara Mandrakizay”, natao maneran-tany tamin’ny 1963.
Vavolombelon’i Jehovah 583 no nandeha nitety an’izao tontolo izao, nandritra ny roa volana sy tapany, 50 taona lasa izay.
Fizarana diplaoman’ny kilasy faha-134 amin’ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada tamin’ny 9 Martsa 2013. Inona avy no vokatra azo noho io sekoly io, nandritra izay 70 taona nisiany izay?
Olona an’arivony no nihaino ny tatitra mampahery sy ny famakafakana ny Matio 24:45-47 tamin’ny fivoriana faha-128 nataon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Mpianatra 48 maneran-tany no nahavita fianarana lalina ny Baiboly nandritra ny dimy volana. Vakio ato ny zavatra nisongadina tamin’ny fizarana diplaoma.